QABSOON ITTI-FUFA -
bilisummaa October 23, 2015	Leave a comment
Gabroomfataan burkutaayee kufa
Bilisummaan dhiiga keenyaan dhufa!
Sululawwanii fi laggeen mara labee
Bosonotaa fi gaarran cufa dhaqqabee
Uummata hunda olkaasee
Dachee sochoosee, raasee
Roorrisaa akkaan dhamaasee
Qabsoon jabaatee-woo itti-fufa
Koloneeffataan isa dhumaa kufa!
Uummanni walitti tokkoomee
Inni biyya ofiitti gabroome
Karaa maraan of-ijaaree
Caccabsee achi ha’a!
Hunduu wal-utubuun waltahee tarkaanfata
Impaayerittii diigee OROMIYAA jaarrata!
Abadan dhiigni ijoollee teenyaa
Dhangalayee hin hafuu
Hardhaa kaasee Oromoon adabateen rafu
Ni tokkooma akka goondaa
Ni hidda akka kanniisaa
Yeeyyii dhiiga xuuxxuu yoom dhisaa?
Biyya abbaa Gadaa mara labee
Qeyee haadha Siiqqee hunda dhaqqabee
Birmaduu taasisuun dhaabachiisa!
Dhiigni keenya faca’ee
Lafeen keenyas harca’ee
Qabsoon keenya itti-fufa
Tokkummaa fi seexaa keenyaan
Sammuu fi irree keenyaan
Bilisummaan nuuf dhufa!
Oromiyaa qarriffoo-saanii keessatti hin dhiifnu
Otoon walaabomin lakkii, hoomaa hin ciifnu
Qawwees ni qabanna
Qalamas ni baanna
Ee, dirra gabrummaa
Karaa hundaan dhaanna!
Egaa qabsoon itti-fufa
Dhiiga keenyaan dhufa!
Barliin, 20. 11. 14
Previous IBSa Ejjannoo
Next The Formation of Peoples Alliance for Freedom and Democracy in Ethiopia